အတတ်ပညာ China Double Jersey Interlock Knitting Machine ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် စက်ရုံ |Morton စက်ယန္တရား
သင်၏တိကျသောအထည်လိုအပ်ချက်အတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် Double Jersey Interlock Knitting Machine ကိုရှာဖွေလိုပါသလား။
မင်းရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့အကိုက်ညီဆုံးဖြစ်တဲ့ Higher Precision Double Jersey Interlock Knitting Machine ကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။
1.Double Jersey Interlock Knitting Machine သည် အပူပျံ့ခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် cam box ၏ အင်အားပုံပျက်ခြင်းကို လျှော့ချရန်အတွက် စက်၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းတွင် လေယာဉ်အလူမီနီယမ်အလွိုင်းကို အသုံးပြုခြင်း။
2.Double Jersey Interlock Knitting Machine တွင် ချုပ်ရိုးတစ်ခုတည်းဖြင့် ချိန်ညှိမှု
3. High-precision Archimedes ချိန်ညှိမှု။
4. ဘက်စုံသုံးစက်၊ ဒိုင်ခွက်တွင် အပုဒ် ၂ ခုနှင့် ဆလင်ဒါတွင် ၄ ပုဒ်ပါသော ကင်မရာများ တပ်ဆင်ထားသည်။ကင်မရာများ၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အစီအစဥ်ကို ပြောင်းလဲလိုက်ရုံဖြင့် ၎င်းသည် နှစ်ထပ်ဖွဲ့စည်းပုံအား ပြောင်းလဲကာ ပြောင်းလဲနေသောစျေးကွက်နှင့် ကိုက်ညီမည်ဖြစ်သည်။
5. ၎င်းကို ကြော့ရှင်းသောအသွင်အပြင်၊ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပြီး လက်တွေ့ကျသောဖွဲ့စည်းပုံအဖြစ် အသားပေးထားသည်။
6. တူညီသောစက်မှုလုပ်ငန်းအဆင့်မြင့်ပစ္စည်းများကိုအသုံးပြု၍ အစိတ်အပိုင်းများလည်ပတ်မှုနှင့်အထည်လိုအပ်ချက်များကိုသေချာစေရန်အတွက်တင်သွင်းလာသော CNC စက်များကိုအသုံးပြုခြင်း။
7. ဂီယာ၏ ပွန်းပဲ့မှုနှင့် ဆူညံသံများကို လျှော့ချရန် ဆီစိမ်ထားသော ဂီယာများကို အပေါ်နှင့် အောက် ဂီယာများ ၊ ထို့နောက် ၎င်းတို့၏ တိကျမှုနှင့် သက်တမ်းကို တိုးတက်စေပါသည်။
8. စက်၏ဒီဇိုင်းဘောင်အသစ်ကိုအသုံးပြုခြင်း၊ dial cam box base နှင့် sleeve သည် တပြိုင်နက်တည်း နေရာချထားခြင်းဖြစ်ပြီး ထိပ်နှင့်အောက်ခြေကြားတွင် အပ်နှင့်အောက်ခြေကြားရှိ ကင်းရှင်းမှုကို ချိန်ညှိရန် ပိုမိုတိကျလွယ်ကူပြီး ပိုမိုလွယ်ကူလာသည်။
ယခင်- ပြောင်းပြန် Terry မြို့ပတ်ချည်ထိုးစက်